10 Fialan-tsasatra faran'izay tsara indrindra any Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Fialan-tsasatra faran'izay tsara indrindra any Eoropa
Trano antitra, tanim-boaloboka, mahatalanjona ny endriky ny, dia zavatra vitsivitsy fotsiny, izay mahatonga an'i Europe ho tonga lafatra amin'ny fialan-tsasatra latsaka. Ny tanàna eropeana rehetra dia manana ny asany, fa ny laharana azontsika 10 Ny fialan-tsasatra latsaka amin'ny lisitra Eropeana dia vitsy amin'ireo be indrindra toerana tsara tarehy.
Mahagaga indrindra i Eropa amin'ny fararano rehefa anaovana loko volom-boasary marevaka ny hazo sy havoana, mena mirehitra, sy ny mavo. Tamin'ny faramparan'ny volana Oktobra, vitsy ny olona an-dalambe, ary izany dia midika fa tokony hanana ny fomba fijery mahafinaritra ianao rehetra. Ny oram-panala dia fotoana iray lehibe hitetezana dia satria mihena be ny trano fandraisam-bahiny sy ny vidin'ny dia.
Mora sy mahazo aina ny mandeha any amin'ireo toerana mahavariana rehetra amin'ny lisitra misy antsika. Avy any amin'ny lohasaha Loire any Frantsa ka hatrany Luxembourg, Ny fitsangatsanganana lamasinina dia tonga lafatra amin'ny famolavolana ny fialan-tsasatra latsaka izay tsy hay hadino indrindra any Eropa izay tsy maintsy nolanianao.
1. Ny fialan-tsasatra latsaka any Umbria, Italia
Na dia maro aza dia tia an'i Tuscany amin'ny fialan-tsasatra latsaka any Eropa, Ny faritra Umbria any Italia dia mahavariana kokoa ary iray amin'ireo toeran'ny fitsangatsanganana faran'izay tsara indrindra any Eropa sy Italia.
Mora miditra amin'ny lamasinina avy tany Roma, Umbria dia manolotra vahoaka marobe ary vidiny mora kokoa any Italia. Tamin'ny faramparan'ny volana septambra ka hatramin'ny Oktobra, afaka mankafy ny truffle fotsy sy festival amin'ny divay vaovao any amin'ny tanàna toa an'i Gubbio ianao. koa, Afaka miakatra any Perugia ianao mandritra ny fetin'ny Eurochocolate isan-taona. Noho izany, I Umbria dia mikasa ny manary tena ao amin'ny faritra mahafinaritra, mankafy ny sakafo sy divay tsara indrindra mandritra ny fialan-tsasatrao any Eropa. Mandritra ny dia fohy na lava, mipetraka amin'ny toerana tia karatra tahaka ny tantaram-pitiavana ianao, ao amin'ny iray amin'ireo toerana fialan-tsasatra fararano tsara indrindra any Eoropa.
Tapakila Florence mankany Orvieto
Tapakila Siena mankany Orvieto
Tapakila Arezzo to Orvieto
Tapakila Perugia to Orvieto
Ny sary an-tserasera dia tsy manome rariny ny mahagaga i Cinque Terre faritra any Italia. Ny trano mareva-tampon'ny havoana, voahodidina tanimboaloboka, trano fisakafoanana eo an-toerana, ary tongotra lavitra lalana, izany rehetra izany dia manao fitsangatsanganana faran'izay maoderina any Eropa. Cinque Terre no tena ahitana 8 tanàna kely ary ny lalamby lamasinina iray mampifandray azy rehetra. Manamora indrindra ny mamangy an'ireo tanàna rehetra ao 2-3 andro raha fohy ara-potoana ianao. Inona no mety ho tsara kokoa noho ny fiaran-dalamby amin'ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra any Eoropa amin'ny fararano?
Ny Cinque Terre dia matetika dia lasibatra mafana mandritra ny fahavaratra ho an'ny tora-pasika sy rano madio. Na izany aza, tsara kokoa ny mitsidika ny fararano, satria ny lalana tery dia tsy dia afa-miala amin'ireo mpizahatany. Ary noho izany, raha mihidy ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana, mbola afaka nahita bar hidy malalaka manakaiky ny ranomasina ianao ary mahatalanjona ny fahitana am-pilaminana.
Afaka mandany vola ianao 4 andro nandinika ireo tanàna ary nandany herinandro faran'ny herinandro tao La Spezia, ny nanombohanao ny dia an-dalamby amin'ny cinque Terre. Avy amin'i La Spezia, manofana fitetezana any amin'ny tanàna hafa izay tianao ianao.
Tapakila La Spezia mankany Manarola
Riomaggiore mankany tapakila Manarola
Tapakila Sarzana mankany Manarola
Tapakila Levanto mankany Manarola
3. Farihy Lugano, Soisa
Rano miboiboika mitete rano, trano miloko terracotta, Ny farihy Lugano any Suisma dia iray amin'ireo toerana fitetezam-pivezivezena ambony indrindra any Eropa. Manana toerana mahavariana i Soisa ho an'ny fialan-tsasatra rava tsy hay hadino any Eropa ary i Lugano dia iray amin'ireo firavaka satroboninahitr'i Soisa.
Mbola mafana ny mari-pana amin'ny tapaky ny volana Oktobra, mba hipetraka eo akaikin'ny farihy miaraka amina vera iray avy amin'ny tanimboaloboka manodidina na manandrana tsato polenta amin'ny fetin'ny fararano. Raha mahaliana anao ny manampy kely ny fientanam-po sy ny fitsangatsanganana amin'ny fialan-tsasatrao latsaka any Eoropa, afaka mitsangatsangana any Monte Bre ianao. Ny fomba fijery avy amin'ny tendrony dia misy fomba fijery mahafinaritra ao amin'ny Lugano Bay.
Ny Old Town of Lugano dia manana trano fonenana maro be, 10 efamira, sy ny lalana miantsena mahafinaritra Via Nessa. Ny ambany, Ny farihy Lugano dia lavorary ho an'ny mpivahiny mahafinaritra sy tia fiainana tsara tarehy. Ny farihy Lugano dia mahafinaritra ho an'ny fialan-tsasatra fohy faran'ny herinandro na fialan-tsasatra lava any Eoropa.
Mivezivezy mora foana ianao any amin'ny farihy Lugano amin'ny lamasinina avy any Milan Central ao anatin'ny adiny iray mahery. Nandeha isan’ora ny fiaran-dalamby tao Milan.
Tapakila mifampitohy mankany Zurich
Tapakila Lucerne mankany Zurich
Tapakila Lugano mankany Zurich
Tapakila Geneva mankany Zurich
4. Ny fialan-tsasatra latsaka tao Hannover, Alemaina
Hannover no tanàna ambany ambany indrindra any Alemaina, fa iray amin'ireo toerana tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra latsaka any Eropa. Ity tanàna lehibe ity dia trano fonenana lehibe iray, indroa ny haben'ny Central Park any New York. Hazo ôaka taloha ary a farihy tsara eny amin'ny zaridainan'ny zaridaina, sahaza ho an-dàlana sy hariva satroka amin'ny fararano.
Ny Marktplatz Old Town sy ny tilikambo famantaranandro dia fiandohana tsara hijerena ny maritrano Gothic. Azonao atao ny manohy mankany amin'ny efitrano fampisehoana vaovao momba ny tanàna, tranobe toy ny grand-lapa izay miatrika farihy. Ny tany maitso maitso dia manodidina ny lapa lehibe ary mameno ny habakabaka mahafinaritra sy ny fijerena loko volamena.
Hannover dia iray amin'ireo vatosoa aleman'i Alemana ary tsy afaka ny ho tsara tarehy kokoa amin'ny fararano. Raha mikasa ny fialan-tsasatra latsaka any Eoropa ianao, avy eo i Hannover no toerana halehan'ny dia. Tsy mbola maro ny mpizahatany no nahita ny majika nataony, toy izany, mety ho tany am-piandohana no nanana ny fotoana tamin'ny fiainanao tao an-tanàna.
Tapakila Bremen mankany Amsterdam
Tapakila Hannover mankany Amsterdam
Tapakila Bielefeld mankany Amsterdam
Tapakila Hamburg ho any Amsterdam
5. Ny Alpes Bavarian sy ny Ala Mainty, Alemaina
Ny Ala Mainty sy ny Alpes Bavarian dia safidy malaza amin'ny fialan-tsasatra mianakavy any Eoropa. Ity faritra mahavariana ity dia any Alemaina dia iray amin'ireo toeran'ny fitsangatsanganana faran'izay tsara indrindra any Alemaina.
Rehefa miakatra amin'ny lamasinina ianao any amin'ny iray amin'ireo tanàna mahafinaritra, ho tsapanao avy hatrany fa nankany amin'ny tantaran'ny Rahalahy Grimm ianao. Farihy mahavariana, ny riandrano Triberg, lohasaha maitso, ary ny tanimboaloboka dia manome antoka ny fialan-tsasatra izay tsy hay hadinoina any Eoropa.
Manova ny lokony amin'ny felany volamena ny ravina, raha ao ambadiky ny any dia misy tendrombohitra manana oram-panala. Ny fitsirihana anaty lakozia hazo aorian'ny fitsangatsanganana an-tongotra any Alps dia zavatra tsy hay hadinoina. Azonao atao koa ny mitsidika ny iray amin'ireo 25 trano fitehirizana ao amin'ny faritra sy Neuschwanstein Castle dia lapa miavaka hitrandraka ny fialan-tsasatrao tany Eropa.
Tapakila Offenburg mankany Freiburg
Stuttgart mankany Freiburg tapakila
Tapakila Leipzig mankany Freiburg
Tapakila Nuremberg mankany Freiburg
6. Ny fialan-tsasatra latsaka tao Ahornboden, Aotrisy
Rissbachtal Valley ary Karwendel Alpine Park, dia toerana mahafinaritra mandehandeha any Aotrisy amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fararano. Ny karazana Alpine an'i Ahornboden dia manana 2,000 hazo sycamore-Maple, taona maro be mahavariana amin'ny lokon'ny fararano amin'ny volamena sy ny voasary. Ny natiora sy ny tendrombohitra dia mamorona toerana mahafinaritra tokoa ho an'ny fitsangatsanganana tsy hay hadinoina tany Eropa.
Ity faritra any Tyrol ity dia natokana indrindra ho an'ny mpanao bisikileta tendrombohitra sy mpandehandeha za-draharaha. The valan-javaboary dia an-tongotra sy lalana an-tongotra maro any amin'ireo tendrombohitra vatolampy ho fialan-tsasatra tsy hay hadino any Eropa.
Marina i Salzburg 3 adiny lavitra miala Ahornboden amin'ny lamasinina, anisan'izany ny famindrana. Ankoatry ny, misy tolotra amin'ny hotely sy trano fandraisam-bahiny lehibe amin'ny Grosser Ahornboden mandritra ny vanim-potoana.
7. Ny fialan-tsasatra latsaka any amin'ny lohasaha Loire, Frantsa
Ti Loire Valley dia any amin'ny faritry ny divay any Frantsa. Midika izany 185,000 hektara ny tanimboaloboka dia mirehitra amin'ny volamena tamin'ny faran'ny volana Oktobra. Noho izany dia amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra ny fitsidihana any Eropa sy ny toerana fitsangatsanganana an-javamaniry mahavariana.
Na dia misy aza dia betsaka ny fitsangatsanganana andro avy any Paris, tena tsara indrindra ianao hijanona mandritra ny faran'ny herinandro any Loire Valley hankasitraka tanteraka ny majika sy ny hatsarany. Atỳ, afaka mitsidika iray na roa amin'ireo lapa mahafinaritra mahafinaritra ianao, toa an'i Chateau de Chambord. Ny sasany milaza fa ity lapa ity dia namboarin'i De Vinci tenany.
The Chambord Castle dia 2 ora atsimon'i Paris ary azonao atao ny manofana dia avy any Paris Austerlitz mankany Blois-Chambord. Tao anatin'ny adiny iray sy sasany, hivezivezy ny lapa tsara tarehy ianao.
Tapakila Paris mankany Strasbourg
Tapakila Strasbourg Luxembourg to Strasbourg
Tapakila Nancy mankany Strasbourg
Tapakila Basel mankany Strasbourg
8. Bordeaux, Frantsa
Tsy misy na inona na inona mahafinaritra sy romana kokoa noho i Frantsa amin'ny fararano. Bordeaux dia tanàna frantsay iray ambany tanàna sy fonenan'ireo tanimboaloboky ny Saint-Emilion ary ny moron-dranomasin'i Arcachon, Ireo 2 toerana dia vitsy ny antony mahatonga anao ho tia anao amin'ny Nouvelle Aquitaine any Bordeaux. lapa, fitsangatsanganana divay, fitsaboana amin'ny spa, sy lesona lesona mahandro, ataovy an'i Bordeaux ho toerana fitsangatsanganana mahafinaritra ho an'ny fialan-tsasatrao.
Tamin'ny faramparan'ny Oktobra ny ankamaroan'ny mpizahatany niverina tany an-trano, noho izany dia mitete any Bordeaux ny vidin'ny fizahan-tany sy ny trano fonenana. Amin'izao vanim-potoana izao dia manomboka ny fijinjana voaloboka ny tanimboaloboka ary afaka mijanona ao amin'ny iray amin'ireo Chateaux maro ao amin'ilay faritra ianao ary manjavona. Azo antoka fa hampiana a tsy manam-paharoa traikefa ao amin'ny rakitsary sary fialan-tsasatrao.
Ny faritra dia tsara aleha amin'ny lamasinina na aiza na aiza any Frantsa, ary misy mivantana fiarandalamby haingam-pandeha avy amin'ny gara Paris-Austerlitz sy Montparnasse.
Tapakila La Rochelle mankany Nantes
Toulouse mankany La Rochelle tapakila
Tapakila Bordeaux mankany La Rochelle
Tapakila Paris mankany La Rochelle
9. Ny fialan-tsasatra latsaka any Paris, Frantsa
Ny fialan-tsasatra fararano tsara indrindra any Eoropa lisitra dia tsy ho feno raha tsy i Paris. Paris dia tsara hatrany, fa tena mahafinaritra amin'ny fararano. Luxembourg Gardens, kafe frantsay frantsay kely, ary ny mozika an-dalambe dia mamorona ny tonga lafatra amin'ny fialan-tsasatra tsy hay hadino any Eropa.
Tsipiho ny sôkôla mafana na jerena ny fetin'ny fijinjana voaloboka voaloboka Montmarte, Paris dia manana toerana mahafinaritra be dia be amin'ny fakana sary an-tsary. Ny toerana misy fotony indrindra dia Jardins du Luxembourg, Parc Monceau, ary Tuileries Garden. Hatramin'ny faran'ny Oktobra, misy fety faran'ny taona fararano amin'ny fitoerana isan-karazany manerana ny tanànan'ny mozika, mandihy, sy fampisehoana zava-kanto. Noho izany, na orana na antoandro, Manolotra zavatra lehibe maro i Paris.
Kely loatra i Paris ary ny vidin'ny dia dia mora vidy amin'ny fotoanan, koa ny fitsangatsanganana fiaran-dalamby sy trano no mahatonga an'i Paris ho toerana fitsangatsanganana matanjaka indrindra amin'ny fialan-tsasatra Eoropeana.
Amin'ny fotoam-lohataona, manaingo ny zaridainan'i Amsterdam sy ny zaridainan'i Amsterdam, fa tamin'ny fararano, voasary, Ny felaka mavo sy mena dia miloko lakandrano sy arabe. Ny hatsarana tanteraka i Amsterdam ary noho izany dia iray amin'ny toerana fialan-tsasatra fararano tsara indrindra any Eoropa. Afaka mandeha mamaky an'i Amsterdam irery ianao 3 andro, nefa te hijanona ela kokoa ianao ary hijanona eo amin'ny zoron-trano rehetra mba hankasitrahana ireo fomba mahafinaritra.
Amsterdam dia tanàna mahavariana fialan-tsasatra any Eoropa, amin'ny 50 tranom-bakoka ao an-tanàna, mitaingina sambo any anaty lakandrano, be dia be ny zavatra mahatalanjona tokony hatao ao amin'ity dia lalan'ny fitsangatsanganana mahavariana ity any Holandy. ankoatry ny, misy zaridaina mahatalanjona izay mahazo manao piknik na bisikileta manodidina raha tsara ny andro.
Amsterdam dia iray amin'ireo tanàna tsara indrindra any Eoropa, azo aleha amin'ny lamasinina na aiza na aiza ao amin'ireo firenena manodidina, ary mora mikatona ao an-tanàna.
Brussels mankany Amsterdam tapakila
Tapakila London mankany Amsterdam
Tapakila Berlin mankany Amsterdam
Tapakila Paris mankany Amsterdam
Bonus: Ny fialan-tsasatra latsaka any Luxembourg
Belzika, Frantsa, ary i Alemà dia manodidina ny firenena Luxembourg kely, ny làlambe fitsangatsanganana làlana tonga lafatra any Eoropa. Ny tanànan'i Luxembourg dia malaza amin'ny tanàna tranainy, miorina amin'ny hantsam-bato ary voahodidin'ny manda medieval. Ny fahaizan-kanto mahatalanjona sy ny hatsikana an'izao tontolo izao no nahazo azy io amin'ny lohateny Izao tontolo izao UNESCO lova toerana. Ny tetezana Grand Ducal sy ny tetezana Adolph dia tsy maintsy jerena ao amin'ny fialan-tsasatrao mankany Luxembourg.
Ny zaridaina sy ny fomba fijery maro no manome fomba fijery mahavariana ny tanàna sy ny manodidina. amin'ny fararano dia tena mahafinaritra ny fomba fijery amin'ny fararano fararano. Noho izany, raha i Luxembourg kosa no tanàna lehibe indrindra any Eropa, mijoro am-pireharehana eo akaikin'ny tanàna cosmopolitan lehibe toa an'i Paris izy. Tena mendrika ny hisafidy an'i Luxembourg amin'ny fialan-tsasatrao any Eropa amin'ny fararano.
Misaotra ny serivisy lalotra mandroso, afaka mandeha na aiza na aiza any Eropa ianao ao anatin'ny fotoana fohy. Hatramin'ny tanàna lehibe cosmopolitan dia hatramin'ny tanàna kely sy mahavariana, ny tanàna rehetra eto amintsika 10 tanàna tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra latsaka any Eropa, manana ny hatsarany sy ny majika tsy manam-paharoa.
Tapakila Antwerp mankany Luxembourg
Brussels mankany Luxembourg tapakila
Tapakila Metz mankany Luxembourg
Tapakila Paris mankany Luxembourg
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao hahita ny tapakila fiarandalamby mora indrindra amin'ny toerana mahafinaritra amin'ny lisitra anay.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Fialan-tsasatra faran'izay tsara indrindra any Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-fall-vacations-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)